Ndeapi Matambudziko Anotarisana nevashandisi veWiricheya? | KarmanHealthcare.com
Dzimwe dzenyaya dzinowanzoitwa nevanoshandisa mawiricheya dzinosanganisira mikoto miduku muzvivako zvekare, nzvimbo dzokupaka dzinonetsa kufamba-famba, kunyange kungotenga kana kushanyira vadikani. Usakanganwe nzvimbo dzisina kuenzana kana materu asingakwanise kuzvifambisa wega wiricheya. Uyezve pane ruzhinji rwekufambisa.
Kufamba pazvifambiso zveveruzhinji kunogona kunetsa uye kutora nguva mumamiriro akanakisa. Zvingadai zvisingabviri neimwe nzira. Iwe unosvika sei kumatanho akasiyana kana elevator ari kunze? Kunyangwe mukaha uripo pakati pechitima nepuratifomu uri nyore kutsika, zvinogona kunetsa kuyambuka uri muwiricheya uye pagara paine mukana wekuti mavhiri anamira.
Kozoitawo matambudziko emaronda epressure kana tsandanyama cramps kukura nekuda kwekugara kwenguva refu. Mawiricheya ari pasi penzira dzinotarisirwa kana dzenguva dzose dzevanofamba netsoka, vatyairi nevamwe vanoshandisa migwagwa uye tsaona dzinogona kuitika kana anoshandisa wiricheya kana kuti avo vakatenderedza vakasaita nekukurumidza zvakakwana. Kana matambudziko ese aya asina kuoma zvakakwana, vashandisi vewiricheya vanofanirwa kutarisana nemafungiro enzanga kwavari.
Vanhu vane muviri vanokwanisa vanoona zvichinetsa kuona mutsara kuburikidza nemushandisi wewiricheya. Vanoshandisa wiricheya vanowanzonzwa kutaurirwa pasi kana kusateererwa. Vamwe vanhu vakagwinya vanofunga zvisiri izvo kuti munhu anoshandisa wiricheya anofanira kuzvimiririra.
Mamwe matambudziko ezuva nezuva anosangana nevashandisi vewiricheya anosanganisira:
1. Maoko akasviba nekuda kwekuzvisunda muwiricheya yemawoko.
Kusviba kwemaoko nekuda kwekusunda wiricheya yako mberi ndeimwe nyaya yakadaro. Kana zvinhu zvoutsanana zvisingakwanisi kuraswa nomunhu nguva dzose, zvinogona kuguma nehosha dzakakomba dzoutano sezvo vanhu vanodya kana kunwa netsvina imwe cheteyo. Pamusoro pezvo, munhu anofanirwa kufungawo kuti vanhu vazhinji - kunyanya avo vari pasi pehurombo, avo vangango shandisa mawoko panzvimbo pemawiricheya - vanoshaya mari yekutsigira hutsanana nguva nenguva kubva mukusvibiswa kwemaoko. Izvi zvinowedzera kupararira kweutachiona kune vavanosangana navo.
2. Magirazi haawanzo kuve pakukwirira kwawo.
Nezvionioni kazhinji zviri pamusoro kana kuti pasi peavhareji yewiricheya, vakaremara vanozviona zvisingakwanisi kuita mabasa avo ezuva nezuva zvakanaka, akadai sokutenga uye kupfeka. Izvi zvinosimbisa pfungwa yekuti nzanga inofanirwa kushanda pahurongwa hwayo hwekubatanidzwa.
3. Kufambisa kweruzhinji hakuwanzo kumisirwa remara vanhu.
Kugadzira zviitiko zveveruzhinji kune avo vakaremara zvinoita kunge kwakakura mutengo wezvivakwa munyika dzichiri kusimukira sePakistan. Veruzhinji vazhinji havafambise mafambisi haana kukwana kuti vagare vanhu vazhinji vanofamba. Pamusoro pezvo, shanduko dzakadai dzinoramba dzisingatariswe zvachose sezvo dzisiri kuratidzwa nevazhinji.
4. Mabhazi anogona kunyanya kunetsa paanenge amirira kuona kana wiricheya ramp inoshanda chaizvo.
Nemabhazi, kumanikidzwa kwekuyedza wiricheya ramp pakati peakakwirira maawa anozivikanwa kutambudza avo vakaremara, kazhinji vachivamanikidza kuti vasiye kushandiswa kwemabhazi zvachose. Chinofanirawo kucherechedzwa ndechekuti mabhazi mazhinji senge akavakwa ramp, inozvirumbidza masitepisi ayo anowedzera kukanganisa avo vakaremara panzvimbo.
5. Vanofanira here kusiya nzvimbo mubhazi yemutyairi?
Imwe gakava rakakurumbira rinobuda maererano nekushandisa bhazi nderekuti kana nzvimbo dzevatyairi dzinopihwa pekutanga pane nzvimbo dzinogara mawiricheya. Saka nekudaro, mumwe anogona kupokana kuti vabereki vanogona kugona kudzora vacheche vavo mumaoko avo, nepo ivo vari pamawiricheya kazhinji vakanyanya kurembera zvekutadza kutenderedzwa.
6. Kuita nevanhu vanoshungurudza nzvimbo dzekupaka WHEELCHAIR.
Kuita nevanhu vanoshandisa zvisizvo nzvimbo dzemawiricheya inyaya inongogara isingatarisirwi nevakuru vehurumende nevehurumende - kungave kuzvipatara zvekunze, kunzvimbo dzekutengesera, kana nzvimbo dzekutandarira. Zvinotonetsa, nzvimbo dzekupaka idzi hadzina kunyorwa senzvimbo dzemawiricheya kana kuti vanhu vanotenga nzira yavo kuburikidza nenzvimbo dzekupaka vachishora vashoma vatova neropafadzo shoma shoma muzita rayo.
7. Iyo yakasviba inotaridzika iwe yaunowana kana iwe uchityaira mune yakaremara kupaka nzvimbo.
Kushoreka munzanga zvakare kunoratidzika kuva chipingamupinyi chenguva dzose kumatanho ehupenyu hwevabatiri; kupenya, kunongedza, uye kuvhenekera kweruzhinji zvese zvinowanzo kuratidzwa sevashandi vemaoko vanotyaira munzvimbo dzekupaka ruzhinji. Kazhinji, izvi zvinovavhiringidza kubva pakushandisa zvivakwa zvakasarudzika, kuvaendesa kunzvimbo yekuzviparadzanisa nevamwe mukufamba kwenguva, uye zvichikanganisa hutano hwavo hwepfungwa.
8. Iwo anotaridzika anokupa vanhu ekuita zvakanyanya kuita zvakasarudzika sekuwana gasi.
Kunyangwe avo vakaremara vakaedza kutyora zvipingaidzo uye votanga nzira yekuzvigutsa uye kubva zvino vachiita basa rakareruka - kureva.
9. Kugara uchiita kuti vamwe vanhu vazive kuti iwe wakanaka nguva dzose!
Izvo zvinowedzera kuwedzera kwavo kupindura kunonetesa "Wakagarika here," mibvunzo - kazhinji inodzokororwa tsika. Avo vakaremara saka vanoiswa pasi pevanoonekwa uye vomanikidzwa kupindura mune izvo, kana zvisina kudaro ivo vanogona kukurudzira ungano dzevateereri vasina tariro.
10. Kupindura mibvunzo isina musoro senge "Une basa here?"
Mibvunzo inopinda inowedzera mukukanganisa kwavo: ingave iyi mibvunzo inobvunza kumabasa avo, dzidzo, kana chinzvimbo chemuchato, ivo vese vanokuvadza zvakaenzana avo vakaremara vanoyeuchidzwa zvisina kunangana nezvekusagona kwavo kupa uye kuzadzikisa mabasa ezuva nezuva.